Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 30
Azo atao ve ny mamolavola karazana voankazo, voankazo na zavamaniry vaovao, izay samy hafa sy tsy mitovy amin'ireo karazana fantatra hafa? Raha eny, ahoana no anaovana azy?
Azo atao izany. Ny zava-bita iray izay nahomby tamin'io andalana io dia fahombiazana iray tena malaza sy malaza indrindra dia i Luther Burbank any Santa Rosa, any California. Atoa Burbank dia mbola tsy nisy, araka ny fantatsika, dia namolavola karazana hafa sy karazany hafa saingy tsy misy manakana azy tsy hanao raha toa ka manohy ny asany izy. Mandraka ankehitriny, raha ny fahalalantsika dia ny ezaka nataony dia nitarika ny fiampitana ny karazan-javamaniry sy zavamaniry sasany, tsy namorona karazana hafa rehetra, fa ny iray manana ny toetran'ny iray na ny iray na ny roa na karazany maro ampiasaina amin'ny famolavolana vaovao. Kaonty maro no navoakan'ny asan'i Mr. Burbank, na dia toa tsy nambarany izay rehetra fantany sy izay rehetra nataony aza, mba hahatratrarana ny fahombiazany. Izy no nanolotra fanompoana tsy azo toherina ho an'ny olona: naka ny fambolena tsy misy dikany sy tsy misy dikany izy ary nampitombo azy ireo ho lasa kirihitra ilaina, sakafo mahasalama na voninkazo mahafinaritra.
Azo atao ny mamolavola legioma, zavamaniry, voankazo, na felana, izay mety hananan'ny saina. Ny zavatra voalohany ilaina hamolavola karazana vaovao dia: ny hiteraka azy. Raha tsy afaka mamorona karazana vaovao ny saina iray dia tsy afaka mamolavola izany saina izany na dia mety amin'ny alàlan'ny fandinihana sy ny fampiharana azy aza no hamokarana karazana karazany vaovao. Ny olona maniry ny hamorona karazana vaovao dia tsy maintsy misaintsaina tsara ny fototr'ilay karazana hananany ary avy eo tsy maintsy miketrika am-pahatokiana azy. Raha matoky izy ary hampiasa ny sainy amin-jotom-po ary tsy hamela ny eritreriny handehandeha any amin'ny karazan-javatra hafa na tsy mitrosa amin'ny fotoam-pivavahana tsy misy fotony, fa hieritreritra sy hamoritra ireo karazana izay hananany izy, dia ho bevohoka rehefa mandeha ny fotoana. ny eritreritra izay haneho azy ny karazana niriany. Io no porofo voalohany ny fahombiazany, fa tsy ampy. Tsy maintsy tohizany hatrany ny eritreritra izay nofinofisiny ka nieritreretany tamim-paharetana an'io eritreritra manokana io nefa tsy nirenireny. Raha mbola mieritreritra izy, dia ho lasa mazava kokoa ny eritreritra ary ho lasa tsotra ny fomba hitondrana ireo karazany vaovao eto amin'izao tontolo izao. Mandritra izany fotoana izany dia tokony hametraka ny tenany hiasa amin'ireo karazan-java-maniry akaiky azy izay ao an-tsainy izy; mba hahatsapa ao aminy; hahafantatra ny fihetsehana samihafa sy ny fiombon-kevitra sy ny fampahatsorana ny sakam-boankazo izay mihazakazaka amin'ny lalan-drà sy ny lalan-drà, hahatsapa ny tiany ary ny hanomezana azy ireo, hiampita ireo zavamaniry nofidiny ary avy eo hieritreretany ireo karazam-boasary ao anatiny. fiampitana, hahatsapa fa mamolavola avy amin’ireo karazany roa nofidininy ary hanome endrika endrika ara-batana. Tsy tokony ho izy, ary tsy izy, raha efa lasa lavitra izao izy, dia kivy raha tsy mahita indray mandeha ireo karazam-boany vaovao ho vokatra. Tokony hanandrana sy hanandrana manandrana indray izy ary rehefa manohy manandrana dia faly izy hahita ny karazan-javamaniry vaovao ho tonga, satria azo antoka fa hanao ny anjarany.
Ny olona iray izay hitondra karazan-java-maniry vaovao vaovao dia tsy hahalala firy rehefa vao manomboka, fa tokony hahafantatra tsara izay rehetra azony ianarana amin'ity asa ity. Ny zavatra mitombo rehetra dia mahatsapa ary ny olona dia tokony hahatsapa miaraka aminy ary tia azy ireo, raha mahalala ny lalany izy. Raha manana ny tsara indrindra ao aminy izy, dia tsy maintsy manome izay tsara indrindra ananany ho azy ireo. Ity fitsipika ity dia mitazona tsara amin'ny fanjakana rehetra.